Semalt: Nzira yekudzivirira Pop-Ups neAd Blockers
Zviziviso zvePap-up zvave zviripo kubvira pakusvika kweWeb Wide Web. Lisa Mitchell, uyo Semalt nyanzvi, anotsanangura kuti saizvozvowo matanho emabhaneni, iyo nzira iri nyore yevashambadziri kune vahedheni kana kukurudzira michina yavo nemashandi paIndaneti. Kunyange zvazvo mamwe ma-pop-ups anobatsira uye anobatsira, nhamba huru yevanhu vanogona kuparadza nzvimbo yako.
Chii chinonzi pop-up ad?
Chokutanga pane zvose, ngatitsanangurire kuti chii chinonzi pop-up. Pop-ups ndiwo matabho, mahwindo, uye mabhokisi anozvizarura pachake uye anogara ipapo kusvikira taita chimwe chinhu kuti tivhare - php report tools open source. Iyo yakasiyana-siyana yep-pop-ups ipap-pasi, iyo hwindo rinotanga seri kwewebhu dzedu. Ichokwadi kuti havasi vese-pop-ups vakafanana mune zvimwe zvinhu uye zvinhu. Dzimwe dzadzo dzinobatsira uye hazvikudziri kupinda mazita ekushandisa uye mapepaji, asi mamwe mavara-famba anovhiringidza uye anokuvadza sezvavanotumira zvikumbiro kune vashandisi uye vanovakurudzira kuti vabhadhare kune zvinyorwa. Muenzaniso we scareware pop-up ndewemadwaretips.com.
Nzira yekudzivirira sei pop-up Ads?
Pane nzira nhatu dzekuvhara p-pop-up munzira: browser yako yekugadzirisa, ad blockers yakadai seAdBlock uye yakatsaurirwa pop-up blockers.
1..Pop-Up Kudzivirira muWeb Browser yako
Mawebvuroji webhutta ane mawo ega anonyanya kuvharidzirwa. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, uye dzimwe mhando dzose dzinoshandisa zvipikiso zvakasiyana-siyana, uye kwete dzose dzatiregedzei kusarudza kana kudzivisa pop-ups pawebsite kana kuti kwete.
Sezvo zita rayo rinoratidzira, ma-pop-up blockers acharamba achivhara matanho ose emap-up, angave akakubatsira iwe kana kwete. Kusiyana nevanosvitsa vanhu, map-block-blockers havadzivisi chero rumwe rudzi rwekuzivisa. Kuti uzive zvakawanda pamusoro pavo, unongoda kuverenga "zvakakurumbira pop-up blockers yeChrome," "inozivikanwa uye inonyanya kudiwa pop-up blockers yeFirefox," uye "yakanakisisa uye inonyanya kubatsira pop-up blockers ye safari" mune search engine. Microsoft Edge haina nzira chaiyo yekudzivirira matanho evanhu vakawanda.
Zvipikiso zvepup-up zvinokumbirwa nenzira imwechete sezvizivo zviri mukati-peji; iyo vadzidzisi vanogona kumira zvose zvavo pasina. Kana usina kushandisa shanho blocker kare, tinokurudzira kuti uedze AdBlock. Icho chimwe chezvakanakisa uye zvakashandiswa zvakanyanya ad block block paIndaneti. Zvisinei, hazvidziviriri mapeji ose epap-up kamwe chete. Izvi ndezvikonzero zvekusiyana pakati pezvikamu zvitatu-zvekare uye zvekutanga kutengeswa. Semuenzaniso, EasyList, seti yefaira mitemo nemitemo inoshandiswa nemarudzi ose adec blocker, kazhinji inorega kufambidzana kwevanhu vekutanga. Kana iwe uchida kuzvitarisa, unofanira kutarisa Fanboy's Annoyances filter list. AdBlock ichavhara nyore nyore zvikumbiro zvinozarura vanhu vakawanda. Dzimwe nguva mafaira anoita zvekare anogonawo kubatsira kumisa mapup-ups nekusasa dhesi dzisina kufanira kunze. Imwe mhando yep-ups iyo inogona kudziviswa neAdBlock inoshambadza macheza. Kunyange zvazvo adware inobatanidza neyokusununguka kwekubudiswa kwemasayiti eruzhinji uye kushandiswa kwepurogiramu dzisina purogiramu, nzvimbo dzepamusoro dziri kuendeswawo zvakare.
Ichokwadi kuti hazvisi zvose zvinoparadzirwa zvep-up zvinotyisa, zvinokuvadza kana zvinogumbura, iwe unogona kudzivisa zvizhinji zvezvidikanwi zvisina kufanira nenzira dzakataurwa pamusoro.